WSL2 Yakagadzirira Mass Mass Kubvumirwa Kuuya Nokukurumidza | Linux Vakapindwa muropa
Yakave nguva yakareba kubva ipapo WSL2, yechipiri vhezheni yeWindows Subsystem yeLinux, inowanikwa, asi kwete yemunhu wese uye zviri pamutemo. Ichi ndicho chinhu chichaitika munguva pfupi iri kutevera, nekuti Microsoft yakatogadzirira kutorwa kwevanhu vazhinji, izvo zvinoreva kuti ichave ichiwanikwa kune wese munhu uye kuti inogona kuiswa pasina kuita chero gadziridzo. Sekunyora uku, izvo zviripo zviri pamutemo ichiri yekutanga vhezheni.
WSL2 ichagara padivi peWindows 10 v2004. Kana nguva yacho yasvika uye vanotsanangura sei pano, Microsoft ichagadzirisa iyo kernel yeWindows Subsystem yeLinux, chimwe chinhu chavachaita kubva muchikamu chayo kana basa rakanyatsogadzirirwa icho chatinogona kuwana kubva kuKugadziridza / Kuvandudza uye chengetedzo / Windows Gadziriso / Tsvaga zvekuvandudzwa. Mune mamwe mazwi, isu tichaenda kubva kuWSL1 kuenda kuWSL2 kana isu tatova nayo yakamisikidzwa uye nekushandisa izvo zvichakamirira kugadzirisa.
WSL2 inosvika neyakagadziriswa Linux kernel
Kune avo venyu vari kuverenga nezve izvi kekutanga, tsanangurai kuti Windows Subsystem yeLinux iri ane mutsa muchina chaiwo unotitendera run Linux terminal paMicrosoft system. Pakati pezvimwe zvinhu, kubva kune ino terminal tinokwanisa kushandisa maturusi akasimba seFFMPEG, chero bedzi tichiisa mapakeji anodiwa. Zvakare, zvirinani zvinoshanda muWSL1, kune maturusi ayo anotibvumidzawo kumhanyisa Linux zvishandiso nemushandisi interface.
Windows 10 v2004 inofanira kusvika zviri pamutemo muna may uye, pamusoro pekuunza WSL2, ichasanganisira kuvandudza senge tembiricha tembiricha kubva kumaneja maneja, kugadzirisa mukugadzirisa manejimendi, ruzivo rwakagadziridzwa rwepiritsi / PC basa, kugadzirisa mukutsvaga uye zvimwe zvitsva. Vashandisi vasingashiviriri vanoda kuyedza inotevera vhezheni yeWindows 10 izvozvi, izvi uye nevenguva yemberi, vanogona kuzviita nekunyorera ku Windows Insider chirongwa iyo yavanogashira nayo nhau dzese se "beta tester".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » WSL2 Yakagadzirira Mass Kugamuchirwa, Inowanikwa kune wese Munhu paWindows 10 v2004